विद्यार्थीले अान्दाेलन गरेपछि बागचाैर नगर शिक्षाका बिरेन्द्र प्रकाश डिसीकाे खुल्ला पत्र
सल्यानकाे बागचाैर नगरपालिकामा शिक्षा शाखाकाे काजमा नियुक्ती भएका शिक्षक बिरेन्द्र प्रकाश डिसीले अाफ्ना विद्यार्थीहरुलार्इ खुल्ला पत्र लेखेका छन् ।
भदाै २ गते बागचाैर नगरपालिकाले नगर शिक्षा शाखामा बिरेन्द्र प्रकाश डिसीलार्इ तानेपछि नियुक्ती दिएपछि उनकाे विद्यालय शिशु जागरण मावि खाेरबारेका विद्यार्थीहरु पढाइ अवरुद्व भएकाे भन्दै अान्दाेलीत भएकाे समाचार अाएपछि उनले विद्यार्थीलार्इ खुल्ला पत्र लेखेका हुन् । पत्रमा उनले पठनपाठन सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायलार्इ खबरदारी गरेकोमा विद्यार्थीलार्इ धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
उनले अाफु नहुँदा अाफ्नाे विषय अरु शिक्षक शिक्षकाले पढाउन सक्ने भन्दै त्याे समस्या अाफ्नाे नभएकाे बताएका छन् । अाफुभन्दा भन्दा दक्ष र सिनियर शिक्षक उक्त विद्यालयमा अरु भएकाले अरू शिक्षकले पनि पढाउन सक्ने बताएका छन् । अाफु केहि समय पछि पुनह त्यही विद्यालयमा फर्कने उनले बताएका छन् ।
हेर्नुहाेस् शिक्षक विरेन्द्र प्रकाश डिसी पत्र जस्ताकाे त्यस्तै
विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई मेरो खुल्ला पत्र
प्यारा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु,
श्री शिशु जागरण माध्यमिक विद्यालय
बा.न.पा.-९, खोरबारे सल्यान
आराम छु आराम चाहन्छु,
समयको आफ्नै गति छ तरपनि कहिलेकाही त्यो गति छिटो भएको जस्तो पनि लाग्दो रहेछ। मैले मा.वि. खोरबारेको प्राङ्गणमा पाइला टेकेको करिब १० वर्ष पूरा हुदैछ। आज म त्यो प्राङ्गणबाट केही टाढा छु। र सोही कारण पनि यो पत्र लेख्न बाध्य भएको छु। आफैले प्रत्यक्ष अनिभुती गरेका बिगतदेखी हालसम्मका ती दिनहरु सम्झिएर आज यो मनमा छचल्की रहेका ति यादहरु यो पत्र मार्फत पोख्ने प्रयास गरेको छु।
जुन दिन मैले मा.वि. खोरबारेमा नि.मा.वि. गणित विषयमा नियुक्ति पाएँ त्यो दिनदेखी हालसम्म पनि आफ्नो कर्तव्य ईमानदारीताका साथ पालन गर्दै आफू र आफ्नो भविष्यलाई समेत वेवास्ता गरेरै म शिक्षण पेशामा पुर्ण समर्पित छु र निरन्तर समर्पित रहिरहनेछु। मैले त्यो विद्यालयमा मेरो जीन्दगिकै सबैभन्दा जोस र जाँगरले भरिएका दिनहरु बिताएको छु। ती दिनहरु म सजिलै भुल्न सक्दिन र मलाई पुर्ण विश्वास छ मेरो रगत र पसिनाको लागानी फोकटमा खेर गएको छैन। मलाई दृढ आत्मविश्वास छ मैले त्यहाँ जागिर मात्रै पकाएको छैन। मैले आफ्नो विषयको कोर्स मात्रै पढाएको छैन। मैले यी हातले हाजिर मात्रै भर्ने काम गरेको छैन। जुन समयक्रम सगै त्यो समाजको चेतनाले क्रमशः पुष्टि गर्दै जानेछ।
भाइबहिनीहरु, मलाई थाहा छ आज म काम र भुमिकाले शिक्षा क्षेत्रको अर्को ठाउँमा छु। म यहाँ कुनै रहर वा बाध्यताले आएको छैन। कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले जागिर खान आको पनि हैन। म यहाँ सधैंभरी यहि काम र भुमिकामा रहने पनि छैन। मात्रै केही समय सरकारी कर्मचारी समायोजन भै आवस्यक पदपूर्ति हुदासम्म नगर शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम म यो कार्यालयमा काजमा छु। जस बापत मैले अर्को छुट्टै तलब भत्ताको सुविधा पाउने पनि होइन। सुविधा र व्यक्तिगत लाभको हिसाबले मलाई कुनै फाइदा छैन र मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन। मैले आफ्नो फाइदा/बेफाइदा लाई भन्दा पनि नगर शिक्षा समितिको निर्णयलाई सम्मान गर्दै समय परिस्थितिको माग र आवश्यकतालाई बोध गरेरै म केही समयको लागि मात्रै यहाँ छु। केही समय पछि म पुनः त्यही प्राङ्गणमा आउने नै छु।
मेरो अनुपस्थितिमा मैले पढाउदै आएका विषयहरु पठनपाठन भैरहेको छैन र विद्यार्थीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुदैछन भन्ने खबर सुनेर म निकै दुखित भएको छु। मलाई पुर्ण विश्वास छ कि त्यहाँ मेरो विषयसँग सम्बन्धित म भन्दा दक्ष र सिनियर शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई मैले त्यहाँबाट आउँदा मेरो बारेमा सबै कुरा गरेरै आएको थिएँ। मेरो अभावमा त्यो विद्यालय चल्नै नसक्ने हो भने त्यो समस्या मेरो होइन उहाँहरुको हो। म आधारभुत तहको गणित शिक्षक थिएँ जसको विकल्पमा गणित विषयका मा.वि. र आधारभूत तहका दुईजना सरहरु राहत दरबन्दीमा अझै त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। अर्कोकुरा मैले पढाउने अर्को विषय अर्थशास्त्र थियो जुन सामाजिक समुहका जोकोही सर मेडमले पढाउन सक्नुहुन्छ। आधारभुत तहमा म बाहेक ८ जना, मा.वि. मा २ जना र विद्यालय श्रोतमा १ जना गरि जम्मा ११ जना सरमेडमहरु विभिन्न दरबन्दीमा रहेर त्यहाँ पढाउनुहुन्छ। जुन शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको सन्दर्भमा र विषयगत सन्दर्भमा पनि प्रयाप्त दरबन्दी हुन। सोही कारणले नै मलाई काजमा यता तानिएको रहेछ। यता नगर शिक्षा शाखामा सात जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेछ जसमा हामी तीन जनाले सो काम गरिरहेका छौं।
देशमा नयाँ संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयन हुदै तीन तहको सरकार गठन भैसक्दा हामी सबैका केही खास अपेक्षाहरु थिए जुन पूरा हुने क्रममा छ्न र केही बाँकी नै छन। शिक्षासँग सम्बन्धित संघिय/प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा कानुनहरु बन्दैछन जसको सफलताको लागि कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको साझा कर्तब्य पनि हो।
हिजोअस्ती मा.वि. गणित शिक्षकको माग गर्दाको क्षण मैले बिर्सिएको छैन। प्र.अ. ले राजिनामा गर्दाको वि.व्य.स. बैठक मैले बिर्सिएको छैन। अभिभावकहरुको ज्ञापन पत्र र त्यसपछिका अभिभावक भेलाहरु मैले बिर्सिएको छैन। विद्यालय प्राङ्गण वरिपरि वृक्षारोपणदेखि, सरसफाइ कार्यक्रम, भाइबहिनीहरुले बनाएका चित्रकला, अभिनय र प्रतिबिम्ब प्रकाशनसम्मका ती सबै घटनाको म प्रत्यक्ष साक्षी छु। आज म यहाँ बसेर रमिता हेर्ने पक्षमा कदापि छैन। बरु यहि अवसरलाई सहि सदुपयोग गर्दै त्यो विद्यालय लगायत नगरका ६८ वटै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा केही काम गर्ने तयारीमा हामी जुटेका छौं। जसको परिणाम आउन केही समय अवश्य लाग्ने छ।
अन्तमा भाइबहिनीहरुले पठनपाठन सुचारु गर्न सम्बन्धित वि.व्य.स., शिक्षक र अभिभावक सबैलाई खबरदारी गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दै यथाशीघ्र पठनपाठन सुचारु गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्म आन्तरिक जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गरियोस। मेरो सुझाव छ।
उही तपाईहरुको शुभचिन्तक शिक्षक
विरेन्द्र प्रकाश डि. सि.
हाल: बागचौर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सम्बन्धित यस अघिकाे समाचार